सखरखण्ड खादा हुने फाइदाहरु - ज्ञानविज्ञान
१. सखरखण्डको सेवनले अन्धो हुनबाट यसले बचाउछ ।
यसमा भिटामीन ए लुकेको हुन्छ जुन अन्धो हुनबाट जोगिनका लागि अति आवश्यक छ ।
Don't Miss it पटक पटक छुन नहुने अंगहरु
Up Next कागको लागि हर्स न बिस्मत तर मानिसको लागि यो ज्यादै उपयोगी फल, बेल
निद्रा नलागेमा,यसो गर्नुहोस्
तपाईंलाई निद्रा नलाग्ने समस्या छ ? त्यसो हो भने त्यसको गतिलो औषधि हो,स्नान । स्नानले शरीरमा फुर्ति ल्याउनुका साथै निद्रा…